Abakhiqizi be-Biogas Project & Abahlinzeki - China Biogas Project Factory
Ithangi lokugcina igesi elintantayo
Kuvame ukusetshenziselwa imishini enezinguquko ezinkulu ezintweni zokusetshenziswa. Sicela uxhumane nathi uma unezidingo.
Ingilazi ehlanganiswe nethangi lensimbi isetshenziswe kabanzi ekulondolozeni ukudla nokuphuza amanzi, ukuphathwa kwendle, ubunjiniyela be-biogas, isitoreji sezinto zobhontshisi ezomile, i-petrochemical nezinye izimboni.
Iningi lazo lisetshenziswa emapulazini amancane (cishe imfuyo eyi-10000-20000) kanye nomkhiqizo wezolimo ozimele kanye namabhizinisi wokucubungula umkhiqizo.
Kumabhizinisi asepulazini nabalimi, Ukwahlukaniswa kwe-CSTR kuyisinqumo esingcono kakhulu, esinobuhle nokusebenza okulula.